မနက်တိုင်း ကားနဲ့အပြည့်လာစားကြတဲ့ မဖြူမုန့်ဟင်းခါး ဘယ်လောက်ကောင်း
16 Aug 2018 . 4:35 PM
ဗမာမှန်ရင် မုန့်ဟင်းခါးလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ မျက်လုံးထဲထိပါ မုန့်ဖတ်၊ဟင်းရည်၊ ငှက်ပျောအူလေးတွေပုံဖော်ပြီး သွားရေတမြားမြားကျအောင် စွဲလမ်းရတဲ့အမျိုးမို့လား?
မုန့်ဟင်းခါးဆို နေရာဒေသအလိုက် ချက်နည်းအမျိုးမျိုးရှိသလို ဈေးနှုန်း၊ အရသာကလည်း ကွဲသွားတတ်တာမျိုးလေ။
ဒါပေမယ့် မုန့်ဟင်းခါးကို ရွှေလို တန်ဖိုးထားပြီးစားရတဲ့ ဆိုင်ဆိုတာ ရန်ကုန်မှာ နာမည်ကြီး အင်းလျားလမ်းက မဖြူမုန့်ဟင်းခါးပဲ ဖြစ်မှာအသေချာပဲနော်။
မင်းဟာက မုန့်ဟင်းခါးတစ်ပွဲကို ရွှေလိုတောင် အမွှန်းတင်ရလောက်အောင် ဘာတွေများ ထူးခြားနေလို့လဲဆို-
ရန်ကုန်မှာ မနက်အစော ၅နာရီခွဲဆိုတာနဲ့ ဖွင့်ပြီး မနက် ၈နာရီခွဲဆိုတာနဲ့ အကုန်ကုန်လို့ ဆိုင်ပိတ်တဲ့ထိ နာမည်ကြီးတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးပါ။မနက် ၈နာရီခွဲဆိုတာ သူများတွေအိပ်ရာထတုန်း အချိန်လေ။ အဲ့အချိန်တွင်းတောင် အပြောင်အစင်ရောင်းရလောက်အောင် ဘာတွေများ ဒီလောက် နာမည်ကြီးပါလိမ့် ဆိုရင်တော့ အခရာက စပ်လည်းစုခဲ့တယ်။ စားလည်း စားခဲ့တယ်။
မဖြူမုန့်ဟင်းခါးက ဟိုးအရင် မဖြူရောင်းခဲ့တာကို ခု မဖြူရဲ့သမီး မနှင်းဆီက ဆက်ရောင်းတာလို့သိရတယ်။ မနှင်းဆီဆိုတဲ့အတိုင်း ဖြူဖြူချောချောနဲ့ အန်တီကြီးက ထင်သလိုမချေပါဘူး။ အနေတည်တဲ့ပုံပါပဲ။ မုန့်ဟင်းခါးကတော့ စောစောကုန်တတ်လွန်းလို့ ဟင်းရည်ကို နည်းနည်းပဲလုပ်လားကြည့်လိုက်တော့လည်း အိုးကြီးက အကြီးကြီး။
အခရာကသွားတဲ့ ၈နာရီဝန်းကျင်တောင် အရည်က အိုးကိုစောင်းထားရပြီ။ ဘေးမှာတော့ ဆီပူပူကြည်တောက်နေတဲ့ အိုးကြီးထဲ အကြော်တွေကို ပစ်ကြော်နေတာ တွေ့ရတယ်။ အကြော်တွေကလည်း ခပ်ကြီးကြီးကိုမှ ဘုရားစူး မွထနေတာပဲရယ်။ အီစိမ့်ပြီး အကြော်တစ်ခုက မုန့်ဟင်းခါးတစ်ပွဲစာအပြည့်ပဲ။ ဆီကသန့်တော့ လည်ချောင်းလုံးဝမကပ်ဘူးရယ်။
အကြော်လည်းစုံတဲ့အပြင် နာမည်ကြီး ငါးသလောက်ဥရတယ်။ ဘဲဥ၊ ငါးဖယ်ရတယ်။ ကြက်သည်းမြစ်လည်းရတယ်ဆိုပဲ။ပုစွန်ကြော်မွမွလေးတွေလည်း ပါတယ်။
ကိုယ်တစ်ပွဲမှာလိုက်တာက မုန့်ဖတ်၊ ပဲကြော်နဲ့ ငါးဖယ်တစ်ပွဲ။ ဟင်းရည်ကတော့ သိသိသာသာပဲ။ အရည်ကျဲလေးကိုမှ ပဲမပါဘူး။ အချိုမှုန့်လုံးဝမသုံးထားဘူး။ ငါးခူ၊ငါးကျီးဓါတ်နဲ့ပဲ ဟင်းရည်အချိုယူထားတယ်။ သူ့မုန့်ဟင်းခါးအရသာနဲ့ သူ့ပဲကြော်နဲ့ကတော့ အစပ်ဟပ်တည့်ပြီး ငရုတ်သီးမှုန့်၊နံနံပင်၊ပဲသီးလေးများထည့်လိုက်ရင် ဘာပြောကောင်းမလဲ စားကောင်းတာရှယ်ပဲ။
ငါးဖယ်ကလည်း “ထုပ်ထုပ် ထုပ်ထုပ်” နဲ့ စားကောင်းတယ်။ ငါးဖယ်စစ်တယ်။
ဈေးနှုန်းကတော့ ကိုယ်ထင်တာ ၄,၅ ထောင်အေးဆေးသွားပြီပေါ့။ မဖြူ မုန့်ဟင်းခါးဆိုတာ အရသာကို ရှယ်လုပ်ထားသလောက် တစ်ပွဲ ဘယ်လောက်လဲ ဈေးမေးရင်လည်း ချေနေတာပဲလို့ ကြားဖူးတော့ တစ်ပွဲကို တစ်သောင်းနီးပါးထိကျတယ်ကြားထားတော့ မမေးရဲဘူးလေ။ တကယ့်တကယ်မှ ၂၅၀၀ ပါတဲ့ ဗျာတို့ရေ။
၂၅၀၀ ဆိုတာ ငါးစစ်စစ်နဲ့ချက်တဲ့ မုန့်ဟင်းခါး တစ်ပွဲ ၁၅၀၀။ အကြော်ကြွပ်မွမွလေးတွေက တစ်ခု ၅၀၀။ ငါးဖယ်က ၅၀၀ ဆိုတာ ဈေးသိသွားတော့လည်း တန်သားပဲပေါ့။
ဒီလောက်နာမည်ကြီးတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးကို ၂၅၀၀ လောက်နဲ့စားရတာ နည်းနည်းနောနော ဝမ်းသာစရာလား..နော့။ ငါးသလောက်ဥ၊ ပုစွန်ကြော်၊ ကြက်သည်းမြစ်တွေကတော့ ဈေးကြီးတာမို့ အဲ့ဒါတွေချည်းစုပြုံစားရင်တော့ တစ်ပွဲတစ်သောင်းဆိုတာလည်း မလွန်ပါဘူးလို့။
ကဲ…ဒါဆိုရင်တော့ အင်းလျားလမ်းထဲက ဥယျာဉ်လမ်းထဲ အ.ထ.က.(၆) ကမာရွတ်ကျောင်းဝင်းလေးထဲက ဆိုင်မှောင်မှောင်လေးထဲမှာ ရောင်းတဲ့ မဖြူမုန့်ဟင်းခါးကို တခါလောက် မနက်ခင်းစောစောထပြီး သွားစားကြည့်ပါဦးလို့။
ဆ်ုင်အနေအထားသန့်ရှင်းမှုကတော့ ထင်သလောက်မဟုတ်ပါဘူး။ အစားအစာတွေကတော့ သန့်တယ်။အကြော်ကတော့ အကောင်းဆုံးပဲ။
မနက်တိုင်းကားအပြည့်နဲ့ သူဌေးတွေကအစ တကူးတကလာစားရတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ နာမည်ကြီး မဖြူမုန့်ဟင်းခါးစားပြီး ခံစားရတဲ့ မြောက်ကြွကြွဖီလင်လေးကို လာခံစားကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။
မနကျတိုငျး ကားနဲ့အပွညျ့လာစားကွတဲ့ မဖွူမုနျ့ဟငျးခါး ဘယျလောကျကောငျး
ဗမာမှနျရငျ မုနျ့ဟငျးခါးလို့ဆိုလိုကျတာနဲ့ မကျြလုံးထဲထိပါ မုနျ့ဖတျ၊ဟငျးရညျ၊ ငှကျပြောအူလေးတှပေုံဖျောပွီး သှားရတေမွားမွားကအြောငျ စှဲလမျးရတဲ့အမြိုးမို့လား?
မုနျ့ဟငျးခါးဆို နရောဒသေအလိုကျ ခကျြနညျးအမြိုးမြိုးရှိသလို ဈေးနှုနျး၊ အရသာကလညျး ကှဲသှားတတျတာမြိုးလေ။
ဒါပမေယျ့ မုနျ့ဟငျးခါးကို ရှလေို တနျဖိုးထားပွီးစားရတဲ့ ဆိုငျဆိုတာ ရနျကုနျမှာ နာမညျကွီး အငျးလြားလမျးက မဖွူမုနျ့ဟငျးခါးပဲ ဖွဈမှာအသခြောပဲနျော။
မငျးဟာက မုနျ့ဟငျးခါးတဈပှဲကို ရှလေိုတောငျ အမှနျးတငျရလောကျအောငျ ဘာတှမြေား ထူးခွားနလေို့လဲဆို-
ရနျကုနျမှာ မနကျအစော ၅နာရီခှဲဆိုတာနဲ့ ဖှငျ့ပွီး မနကျ ၈နာရီခှဲဆိုတာနဲ့ အကုနျကုနျလို့ ဆိုငျပိတျတဲ့ထိ နာမညျကွီးတဲ့ မုနျ့ဟငျးခါးပါ။မနကျ ၈နာရီခှဲဆိုတာ သူမြားတှအေိပျရာထတုနျး အခြိနျလေ။ အဲ့အခြိနျတှငျးတောငျ အပွောငျအစငျရောငျးရလောကျအောငျ ဘာတှမြေား ဒီလောကျ နာမညျကွီးပါလိမျ့ ဆိုရငျတော့ အခရာက စပျလညျးစုခဲ့တယျ။ စားလညျး စားခဲ့တယျ။
မဖွူမုနျ့ဟငျးခါးက ဟိုးအရငျ မဖွူရောငျးခဲ့တာကို ခု မဖွူရဲ့သမီး မနှငျးဆီက ဆကျရောငျးတာလို့သိရတယျ။ မနှငျးဆီဆိုတဲ့အတိုငျး ဖွူဖွူခြောခြောနဲ့ အနျတီကွီးက ထငျသလိုမခပြေါဘူး။ အနတေညျတဲ့ပုံပါပဲ။ မုနျ့ဟငျးခါးကတော့ စောစောကုနျတတျလှနျးလို့ ဟငျးရညျကို နညျးနညျးပဲလုပျလားကွညျ့လိုကျတော့လညျး အိုးကွီးက အကွီးကွီး။
အခရာကသှားတဲ့ ၈နာရီဝနျးကငျြတောငျ အရညျက အိုးကိုစောငျးထားရပွီ။ ဘေးမှာတော့ ဆီပူပူကွညျတောကျနတေဲ့ အိုးကွီးထဲ အကွျောတှကေို ပဈကွျောနတော တှရေ့တယျ။ အကွျောတှကေလညျး ခပျကွီးကွီးကိုမှ ဘုရားစူး မှထနတောပဲရယျ။ အီစိမျ့ပွီး အကွျောတဈခုက မုနျ့ဟငျးခါးတဈပှဲစာအပွညျ့ပဲ။ ဆီကသနျ့တော့ လညျခြောငျးလုံးဝမကပျဘူးရယျ။
အကွျောလညျးစုံတဲ့အပွငျ နာမညျကွီး ငါးသလောကျဥရတယျ။ ဘဲဥ၊ ငါးဖယျရတယျ။ ကွကျသညျးမွဈလညျးရတယျဆိုပဲ။ပုစှနျကွျောမှမှလေးတှလေညျး ပါတယျ။
ကိုယျတဈပှဲမှာလိုကျတာက မုနျ့ဖတျ၊ ပဲကွျောနဲ့ ငါးဖယျတဈပှဲ။ ဟငျးရညျကတော့ သိသိသာသာပဲ။ အရညျကြဲလေးကိုမှ ပဲမပါဘူး။ အခြိုမှုနျ့လုံးဝမသုံးထားဘူး။ ငါးခူ၊ငါးကြီးဓါတျနဲ့ပဲ ဟငျးရညျအခြိုယူထားတယျ။ သူ့မုနျ့ဟငျးခါးအရသာနဲ့ သူ့ပဲကွျောနဲ့ကတော့ အစပျဟပျတညျ့ပွီး ငရုတျသီးမှုနျ့၊နံနံပငျ၊ပဲသီးလေးမြားထညျ့လိုကျရငျ ဘာပွောကောငျးမလဲ စားကောငျးတာရှယျပဲ။
ငါးဖယျကလညျး “ထုပျထုပျ ထုပျထုပျ” နဲ့ စားကောငျးတယျ။ ငါးဖယျစဈတယျ။
ဈေးနှုနျးကတော့ ကိုယျထငျတာ ၄,၅ ထောငျအေးဆေးသှားပွီပေါ့။ မဖွူ မုနျ့ဟငျးခါးဆိုတာ အရသာကို ရှယျလုပျထားသလောကျ တဈပှဲ ဘယျလောကျလဲ ဈေးမေးရငျလညျး ခနြေတောပဲလို့ ကွားဖူးတော့ တဈပှဲကို တဈသောငျးနီးပါးထိကတြယျကွားထားတော့ မမေးရဲဘူးလေ။ တကယျ့တကယျမှ ၂၅၀၀ ပါတဲ့ ဗြာတို့ရေ။
၂၅၀၀ ဆိုတာ ငါးစဈစဈနဲ့ခကျြတဲ့ မုနျ့ဟငျးခါး တဈပှဲ ၁၅၀၀။ အကွျောကွှပျမှမှလေးတှကေ တဈခု ၅၀၀။ ငါးဖယျက ၅၀၀ ဆိုတာ ဈေးသိသှားတော့လညျး တနျသားပဲပေါ့။
ဒီလောကျနာမညျကွီးတဲ့ မုနျ့ဟငျးခါးကို ၂၅၀၀ လောကျနဲ့စားရတာ နညျးနညျးနောနော ဝမျးသာစရာလား..နော့။ ငါးသလောကျဥ၊ ပုစှနျကွျော၊ ကွကျသညျးမွဈတှကေတော့ ဈေးကွီးတာမို့ အဲ့ဒါတှခေညျြးစုပွုံစားရငျတော့ တဈပှဲတဈသောငျးဆိုတာလညျး မလှနျပါဘူးလို့။
ကဲ…ဒါဆိုရငျတော့ အငျးလြားလမျးထဲက ဥယြာဉျလမျးထဲ အ.ထ.က.(၆) ကမာရှတျကြောငျးဝငျးလေးထဲက ဆိုငျမှောငျမှောငျလေးထဲမှာ ရောငျးတဲ့ မဖွူမုနျ့ဟငျးခါးကို တခါလောကျ မနကျခငျးစောစောထပွီး သှားစားကွညျ့ပါဦးလို့။
ဆျုငျအနအေထားသနျ့ရှငျးမှုကတော့ ထငျသလောကျမဟုတျပါဘူး။ အစားအစာတှကေတော့ သနျ့တယျ။အကွျောကတော့ အကောငျးဆုံးပဲ။
မနကျတိုငျးကားအပွညျ့နဲ့ သူဌေးတှကေအစ တကူးတကလာစားရတဲ့ ရနျကုနျမွို့ရဲ့ နာမညျကွီး မဖွူမုနျ့ဟငျးခါးစားပွီး ခံစားရတဲ့ မွောကျကွှကွှဖီလငျလေးကို လာခံစားကွညျ့လိုကျပါဦးနျော။